''အလုပ်ကို သေချာ စေတနာထားပြီးတော့ လုပ်တာကြောင့် ပုံမှန်လေး ရပ်တည်နိုင်နေတာလို့ ထင်ပါတယ်''ေ?? - Yangon Media Group
”အလုပ်ကို သေချာ စေတနာထားပြီးတော့ လုပ်တာကြောင့် ပုံမှန်လေး ရပ်တည်နိုင်နေတာလို့ ထင်ပါတယ်”ေ??
ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ သွက်သွက်လက်လက် သရုပ်ဆောင် တတ်တာတွေကြောင့် ပရိသတ် အားပေးမှုတွေရရှိထားတဲ့ အေးသီတာနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် အခုလိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ”အခုအချိန်ထိ အနုပညာ လောကမှာ အစ်မတို့အနေနဲ့ ပုံမှန်လေး ရပ်တည်နိုင်တာက လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အနုပညာအလုပ်ကို သေချာစေတနာ ထားပြီးတော့ လုပ်တာကြောင့် ပုံမှန်လေးရပ်တည်နိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်”လို့ဆိုပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် အေးသီတာဟာ လက်ရှိမှာ စာရေး ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ဝတ္ထုကို”ခသုံးလုံး”ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ”ဆူးပန်းခွေ သွယ် ဘယက်နှင့် ပေရွက်လိပ် နားထောင်းဆင်” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ”ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ကျောင်းဆရာမတစ် ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဆရာမကြီးခင်ခင် ထူးက အစ်မကိုယ်တိုင်လည်း အရမ်းကိုကြိုက်ရတဲ့ စာ ရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ ဝတ္ထု ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း အရမ်းကိုဝမ်းသာပါတယ်။ ကိုယ့်ကာရိုက်တာအတွက် ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ အစ်မက အညာမှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ ကာရိုက်တာလေးတွေ၊ စကားပြော ပုံဆိုပုံလေးတွေကို လေ့လာတယ်။ ဒါရိုက်တာလုပ်စေချင်တဲ့ ပုံစံလေး တွေကို တိုင်ပင်ပြီးတော့ လုပ်ဖြစ် ပါတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ ဇာတ်လမ်းတွဲများ စွာမှာ ကာရိုက်တာမျိုးစုံနဲ့ ပါဝင်ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ အေးသီတာက သူမအတွက် အနုပညာ အလုပ်တွေ လုပ်ရရင်ပဲ ကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့လည်း ဆက် လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ”ကိုယ်တွေကတော့ အနုပညာအလုပ်ပဲလုပ်နေတာ ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ရင်လည်း အနုပညာလုပ် နေတာပဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားရိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးက အနုပညာပဲလုပ်နေတာ ဖြစ်တာကြောင့် အကုန်လုံးကို ကြိုက်တယ်။ ပရိသတ်တွေ က အစ်မတို့ကို အခုအချိန်ထိ အားပေး တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း အရမ်းကိုကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း မြန်မာဇာတ်ကားတွေနဲ့ မြန်မာသရုပ် ဆောင်တွေကို အားပေးကြပါ”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျပ်သိန်းငါးရာဆုနှင့် ကျပ်သိန်းသုံးရာ ဆုလက်မှတ် သုံးစောင်စီပါဝင်သည့် ဆုလက်မှတ်ပေါင်း ၁၁ဝ?